FAQ: Deal of the Week – SUNNY eSTORE
SUNNY eSTORE ၏ Deal of the Week promotion (ယခုအပတ်အတွက် အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်) အကြောင်း
About SUNNY eSTORE Deal of the Week Promotion
Deal of the Week အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။
၎င်းသည် SUNNY eSTORE မှ ပြုလုပ်သည့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော အပတ်စဉ်ပြုလုပ်သည့် အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကန့်သတ်ထားသည့် ၇ ရက်ကာလအတွင်း ထိပ်ဆုံး တံဆိပ်များမှပစ္စည်းများကို ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့် discount ချထားသောဈေးနှုန်းများဖြင့် ဝယ်ယူနိုင် သောအခါဖြစ်သည်။
What is Deal of the Week Promotion?
It is an exciting weekly promotion from SUNNY eSTORE when attractive discounts are available on products from top brands foralimited period of7days!
Deal of the Week အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ကို ဘယ်အချိန်မှာ ပြုလုပ်သလဲ။
Deal of the Week အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်အား အပတ်စဉ်တိုင်း(နီးပါး) စနေနေ့မှ လာမည့် သောကြာနေ့ညအထိ၊ ၇ ရက်ကာလအတွင်း ပြုလုပ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဝယ်ယူသူများ၏ ဝယ်လို အားအပေါ် မူတည်၍ အစီအစဉ်၏ရက်များ ကွာခြားနိုင်ပါသည်။
When are Deal of the Week Promotions available?
Deal of the Week Promotions take place (almost) every week from Saturday to the following Friday evening, overaperiod of7days. On some occasions depending on customer demand, the dates for these deals may be different.
ဤအစီအစဉ်တွင် ဘယ်သူတွေ ပါဝင်နိုင်သလဲ။
အခြားဖော်ပြထားချက်များ မရှိပါက SUNNY eSTORE ၏ ဝယ်ယူသူအားလုံးသည် Deal of the Week အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
All SUNNY eSTORE’s customers are eligible to participate in Deal of the Week Promotions, unless otherwise specified.
ကျွန်ုပ်တို့၏ website ဖြစ်သည့် COM.MM ပေါ်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ Deal of the Week အရောင်း မြှင့်တင်ရေးစာမျက်နှာမှ ပစ္စည်းများကို တိုက်ရိုက်မှာယူခြင်းဖြင့် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ နံနက် ၇ နာရီမှာ ည ၁၀ နာရီအတွင်း ၀၉ ၈၉၁ ၇၄၉၄၈၉ ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ customer service hotline ထံ ဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် နေ့စဉ် ည ၁၀ နာရီမတိုင်မီ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ Facebook messenger chat ပေါ်တွင် ရေးသားရုံဖြင့် မှာယူနိုင်ပါသည်။
You can participate by ordering the deals directly from our Deal of the Week promotions page on our website at SUNNY.COM.MM
Alternatively, you can also call our customer service hotline at 09 891 749489between 7AM – 10PM to place your order, or simply drop usanote on our Facebook messenger chat before 10PM everyday.
ဤအရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ကာလအတွင်း ကျွန်ုပ် အမှာဘယ်နှစ်ခု ပြုလုပ်နိုင်သလဲ။
Deal of the Week အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များအတွက် ငွေပြန်အမ်းယူခြင်းများကို ခွင့်မပြု ပါ။
For special promotions, we do not accept cancellations of orders once we have delivered the product(s), except in the case of original / manufacturing defects.
Refunds are not allowed for Deal of the Week promotions.